सूचना प्रविधि Archives - Page4of7- विवेचना
काठमाडौं , वैशाख २१। तपाईंले ट्विटर प्रयोग गर्नु हुन्छ भने पासवर्ड परिवर्तन गरिहाल्नुस् । ट्विटरले आफ्ना सबै प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न भनेको छ । आन्तरिक नेटवर्कमा केही समस्या देखिएकाले ट्विटरले आफ्ना ३३० मिलियन प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न भनेको हो । यद्यपि पासवर्ड चोरी भएको या कुनै दुरुपयोग भएको प्रमाण भने पाइएको …
फेसबुक डाटा चोरेको आरोप लागेको क्याम्ब्रिज एनालिटिका बन्द
काठमाडौं , वैशाख २० । फेसबुक प्रयोगकर्ताका गोप्य सूचना चोरेर अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई सघाएको आरोप लागेको कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिका बन्द हुने भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई परामर्श दिने यो कम्पनीमाथि करिब ९ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा चोरेको आरोप लागेको छ । कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गर्दै व्यवसाय बन्द गर्न लागिएको …
सुरक्षित र व्यवस्थित बनाऔँं मोबाइल फोन
डा. प्रकाश बुढाथोकी केही दिन खाना खान नपाए पनि मानिसलाई असहज नलाग्न सक्छ । तर, केही क्षण मात्रै पनि साथमा मोबाइल नहुँदा जीवनको गति नै रोकिएजस्तो, केही नभएको, नपुगेको जस्तो छटपट हुने गर्दछ आजभोलि । मोबाइलले सञ्चारलाई अति नै सहज र छिटो छरितो बनाइदिएको छ । गल्लीदेखि सडकसम्म, घरदेखि कार्यालय घाटसम्म जतासुकै जहाँसुकै …
काठमाडौं, वैशाख १२ । के तपाईले आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइलको अधिक प्रयोग गर्ने अवसर दिनुभएको छ ? मोबाइलको अधिक प्रयोगबाट नानीहरुको आँखामा विस्तारै असर परिरहेको हुन्छ । मोबाइलमा रमाउने नानीहरुको आँखा सुख्खा हुने, दीर्घकालमा आँखामा एलर्जी हुने तथा आँखा चिलाउने समस्या आउन सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालअन्तर्गतको बिपी कोइराला लायन्स …
मानिसको दिमाग पढ्ने ‘हेडसेट’
काठमाडौँ । मुखबाट आवाजै ननिकालिकन कुराकानी गर्न सकिने उपकरणको अविष्कार बैज्ञानिकहरुले गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा च्याटिङको बेला जस्तो शब्दहरु पनि यसमा टाइप गर्न पर्दैन । कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित यो उपकरणले तपाईले भन्न खोजेको कुरो बुझेर जबाफ फर्काउन सक्छ । शोधकर्ताहरुले उक्त उपकरणको परीक्षण १० जनामाथि गर्दा ९२ प्रतिशत सही परिणाम आएको छ । …
काठमाडौं ,चैत्र २६। नेपाल प्रहरीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा नपुगेका प्रहरी चौकीमा आजबाट भिस्याट टेलिफोन सेवा शुरु गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबारदेखि भेरी स्मल अप्रेचर टर्मीनल टेलिफोन सेवाको (भीस्याटको) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नेपाल प्रहरी सञ्चार सेवा निर्देशानालयका प्रमुख डिआइजी डा राजीव सुब्बाले बताए। ‘भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा सञ्चार सहजता ल्याउन भिस्याट …
सञ्चार क्लवको सूचना प्रविधि तालिम सुरु
उर्लाबारी, २३ चैत्र । पूर्वी मोरङका पत्रकारहरुलाई सूचना प्रबिधिका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चार क्लब नेपालको आयोजनामा दुई दिने सूचना प्रविधि तालिम शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाको सहयोग सहयोगमा सुरु भएको तालिमको उद्घाटन मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुशल लिम्बूले गरेका छन् । प्रमुख अतिथिसमेत रहेका …
१३ सय रोबोटको नाच
घटना इटालीको हो । यस देशले रोबोटको फौज तयार गरिरहेको छ । हालै यस फौजका लागि १३ सय भन्दा धेरै रोबोट तयार गरिएको छ, जसबाट विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ । गिनिज रेकर्ड बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रोबोटले नाच प्रस्तुत गरेका छन् । मानव आकारका १३ सय ७२ वटा …
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा समस्या देखिएपछि बिहिबार बिहानैदेखि ग्राहकहरु तनावमा परेका छन् । टेलिकमका दुवै पोस्टपेड र प्रिपेड मोवाइलमा समस्या देखिएको हो । कतिपय क्षेत्रमा मोबाइलबाटै गर्नुपर्ने काम भए पनि ग्राहक समस्यामा परेका छन् । टेलिकमबाटै समस्या भएको भन्दै टेलिकमले मर्मत प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं डेली महिलाहरुको यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अष्ट्रेलियाको ग्रिन पार्टीले महिलाहरुलाई उठेर पिसाब फेर्ने तालीम दिँदैछ ।समाचार अनुसार एउटा विशेष खालको सामानको सहयोगले महिलाहरुले उठेरै पिसाब फेर्न सक्दछन् । सोही विशेष किट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तालीम ग्रिन पार्टीले दिइरहेको छ । यो सामान नली आकारको हुन्छ । जसलाई महिलाहरुले …